HILLING KHUDAARTA: HADDII AAD U BAAHAN TAHAY INAAD ISTICMAASHO FARSAMADA BARADHO, TOON, QAJAARKA, YAANYADA IYO KHUDAARTA KALE - SOOSAARKA DALAGGA
Miyaan u baahanahay inaan dhajiyo dhirta beerta?
Bannaanka u badan ogahay in dhirta u baahan tahay hilling. Mararka qaarkood nidaamkan waxaa lagu sameeyaa sariiraha, iyada oo aan xitaa laga fekerin waxa shaqeynaya iyo in ay muhiim u tahay dhammaan cagaarka. Marka hore waxaad u baahan tahay inaad fahamto: waa maxay hilling iyo waxa dhacaya?
Hilling waa loosening of lakabka sare ee ciidda agagaarka warshad, iyada oo dhulka ku xardhan si saldhig foomka a knoll ah. Tani waa soo dhaweynta agrotechnical taas oo runtii muhiim ah oo faa'iido leh dhirta badan.
Waxay ka qayb qaadataa koritaanka habboon iyo niyadjabka xididada, koritaanka xididada cusub ee quudinta iyo xasilloonida dhirta ee ciidda. Waxay sidoo kale ka hortagtaa ciidda in ay maydheyso inta lagu jiro xilliga roobabka culus, iyo sidoo kale walxaha qaybaha ganacsiga ee dhirta sida dhirta iyo caleenta.
Ka hor inta aanuu barafoobin, habkani waa mid muhiim ah maxaa yeelay waxay ka hortagtaa dalagyada laga yaabo inay barafoobaan. Waxaa intaa dheer, waxay u dhaqmaysaa sida ka hortagga cuduro badan. Si kastaba ha noqotee, miyaa lagama maarmaan tahay in habkan loo isticmaalo dhammaan khudaarta si aan kala sooc lahayn? Si aad uga jawaabto su'aashaan, waxaan si gaar ah u tixgelineynaa naasaha noocyada ugu caansan ee khudaarta.
Hilling waxay muhiim u tahay kobcinta baradhada caafimaad ee haboon. Nidaamka waa in la sameeyaa guga ka dib muuqaalka caleemaha koowaad ee dhulka (haynaya kuleylka ciidda haddii ay dhacdo soo noqoshada lama filaan ah ee cimilada qabow) iyo dhawr jeer oo kale inta lagu jiro muddada koritaanka iyo samaynta miraha.
Tani waxay lagama maarmaan u tahay samaynta faro badan oo digriiga, taas oo si weyn u kordhisa heerka dhalada. Waxa kale oo ay ka ilaalisaa nidaamka xididka laga bilaabo xilliyada roobka, waxay qaboojineysaa xididada iyo dalagyada xididada kulaylka daran.
Iyo inta lagu jiro nidaamka hilling, haramaha ayaa laga saaray, taas oo jiid juuska loo baahan yahay barandhada dhulka.
Markii ugu horeysay ee hilling ee baradho ah waxaa la fuliyaa marka duurka dhulka ku gaaro 15 cm ee height. Taas ka dib - si joogto ah 2 asbuuc walba.
Waa muhiim! Waa lagama maarmaan in la taxadiro muddada ka dib muuqaalka ubaxyada ubax on duurka baradhada. Hilling wakhtigan waxa dhici karta in ay saameyn ku yeelato dhalidda.
Ma waxaan u baahanahay inaan kantaroolo yaanyada? Habkani waxaa loo isticmaalaa nooca cagaaran. Tani waxay si gaar ah u tahay dhabta duurka. Loosing wuxuu keenaa biqilka ee xididada dheeraadka ah, iyada oo dhirta ay si adag u fadhida dhulka iyo ma dabagal dabaylaha xoogan.
Waxaa intaa dheer, nafaqadan dheeraadka ah ee macdanta iyo qoyaanka, taas oo lagama maarmaan u ah miro si ay u koraan dhadhan fiican iyo casiir leh. Marka ugu horeysa ee bacriminta tamaandhada waa horeba 15-20 maalmood ka dib markii la beero.
Kadib mar labaad 2 toddobaad. Guud ahaan, nidaamkan waa in la fuliyaa 3 jeer muddada koritaanka oo dhan. Waxay ku xiran tahay xaaladaha cimilada iyo gobolka geedka.
Waa muhiim! Waxaa haboon in la xusuusto in hilling uu wax ku ool yahay kaliya dhulka qoyan. Nidaamka waa in la sameeyaa ka dib roobka ama waraabinta, sida ugu dhakhsaha badan biyaha oo dhan.
Miyaan u baahanahay inaan qashinka qallalo? Khudaarta, iyo sidoo kale yaanyada, hilling fudud oo kaliya waa fiican. Qajaarada qallalan waxay leeyihiin il awood dheeri ah iyo qoyaan ah qaabka geesaha.
Intaa waxaa dheer, ma aad ka baqi kartid in dhir dhererkiisu uu lumin doono xasilloonida dhulka oo ay sabab u tahay carqaladaynta carrada ama dabaysha xooggan. Waxa ugu muhiimsan ee tani waa saxsanaanta habka, si aanay u dhaawacin xididdada sare ee geedka.
Kaabashka jecel yahay hilling. Hubi bannaanka badan oo waayo aragnimo leh ayaa ogaaday in dhacdadan ka dib, kaabajka "koray" xididada dheeraadka ah, taas oo kordhinaysa xasilloonida, oo aadan ka cabsan karin hoyga.
Inta badan noocyada hore iyo kuwa dhexdhexaad ah ee kaabash waxay u baahan yihiin hal nidaam oo keliya noloshooda oo dhan. Waxaa la qabtaa xilliga uu madaxa bilaabmayo.
Si loo helo koboc habboon iyo qaababka noocyada kale, farsamadan waxaa la mariyaa laba jeer: mar, marka madaxa la sameeyo, mar labaad dhowr toddobaad kadib.
Boorashka Brussels gaar ahaan u baahan tahay hilling waqtiga. Iyo kala duwanaanta kohlrabi waa midda kaliya, taas oo, liddi ku ah, laguma talinayo in ay kufaan - tani waxay sababi kartaa koriinka koriinka ee stembrowers.
Sida for digir, hilling ma aha lagama maarmaanka u ah dhammaan noocyada ay. Farsamada Tani waxay faa'iido u noqon doontaa noocyo dhirta fiiqan iyo shtambovyh. Tani waxay kordhisaa xasilloonida carrada waxayna hagaajisaa socodka nafaqooyinka dhulka.
Noocyada kale, su'aashu way furan tahay - beeraley badan iyo beeraley badan ayaa ku doodaya in beeygu u baahan yahay nidaamkan, maxaa yeelay waxay leedahay nidaam xidid aad u jilicsan oo nugul.
Xaalad kasta, hilling ma noqon doonto waxyeello haddii nidaamka si taxadar leh loo sameeyo. Tan waxaa badanaa la sameeyaa markii ay duurka ay gaareen "koritaanka" ee 15 cm.
Ma taqaanaa? Peasku waxay ku habboon yihiin doorka hormarinta marka la beero dalagyo badan. Xilliyaddiisa, inta lagu jiro koritaanka, nodules ee nitrogen waa mid go'an, kaas oo u shaqeeya bacriminta xitaa ka dib markii dhirta ayaa laga saaray goobta. Diirinta nitrogen macdanku waa qiyaastii 100 g halkii 1 sq. m dhulka.
Digirta, iyo sidoo kale digir, waxa loola jeedaa digirta. Waxay leedahay nidaam xidid habeyn leh oo u baahan in si taxadar leh loo xaliyo. Hilling aan had iyo jeer lagu darin liiska hababka loo baahan yahay koritaanka.
Qofku waa fikirka ah in tani ay tahay dhacdo ikhtiyaari ah, qofna wuxuu u maleynayaa in ay u fiicnaan doonto iyaga si ay u qariyaan dhirta beedka oo ay ka faa'iideysan doonaan - qoyaanka dhulka ayaa sii ahaan doona mudo dheer.
Si kastaba ha ahaatee, halaagidda baadiyaha iyo digirta asparagus ayaa la sameeyaa ka dib markii la waraabiyo, oo lagu riixo dhulka hoostiisa ku yaal saldhigga baadiyaha, ilaa caleen ugu horeysa.
Talaashka qashinka leh dhulka qoyan waxaa lagu magacaabaa cadaan. Tani waxay ka dhigan tahay, ka dib hawlgalka ka dib, madaxyada qarsoodi ah ee dhulka ku yaal waxay helayaan iftiin qurux oo qurux badan oo cufan leh, iyo cagaarka haray dusha sare waxay u egtahay inay noqoto mid casri ah oo casaan ah oo dhadhan leh.
Ugu muhiimsan, horraantii July, dhulka ayaa la ruxay cawska toonta si ay u dedejiyaan habka ay Bisaylkiisa. Xaaladda qaboojinta ee ciidda taas oo ay toonta koraan, iyo soo qaadashada xididkeeda, habkani wuxuu hayn doonaa kulaylka.
Basasha waxay ku xiran tahay nooca dhirta beerta, oo aan loo baahnayn. Geedi socodka koritaanka, waxay gaari kartaa qorraxda iyo qaybta sare ee nalalka waxay noqon kartaa mid dhali karta, laakiin tani macnaheedu maaha in isla markiiba lagu rusheeyo.
Waa ku filan qaansada inuu leeyahay qaybta hoose ee dhulka. Tani waxay xaqiijisaa Bisaylkiisa si deg deg ah iyo, mustaqbalka, kaydinta fiican ee nalalka.
Ka-reebitaanka waa caleemo, waa in la soo saaraa si loo buuxiyo qeyb ka mid ah jirkeeda. Inta badan habkani waxa loo isticmaalaa marka kordhaya ceelka iibka.
Ma taqaanaa? Magaca "basasha" qaanadiisu waxay leedahay duleelka dibedda ee gunta. Waxaa jira ilo ku andacoonaya in ay kor u dhaaftay 5,000 oo sano ka hor waddamada sida Hindiya iyo Shiinaha.
Miyaan u baahanahay inaan basaaso basbaaska? On mawduucan, bannaanka u badan ku doodi oo inta badan ku heshiiyaan ra'yi ah in aanay muhiim ah ka dib dhan. Tani waxay sabab u tahay xaqiiqda ah in nidaamka xididada dhaqanka ah basbaaska ku yaala lakabka sare ee sare iyo hilling ay si fudud u dhaawacdo.
Intaa waxaa dheer, warshadani waxay leedahay luqad xidid. Kobcinta xididada dheeraadka ah ee nafaqada iyo xasiloonida ee basbaaska looma baahna, iyo dheellitirka qoyaanka qoyaanka dhulka ayaa sababi kara xoqan iyo xididdada.
Su'aashii ugu dambaysay ee aanu ka fekereyno maqaalkeenna: Ma waxaad u baahan tahay inaad gashid warshad beerta sida eggplants? Eggplants waa dhirta abaarta u adkeysata waxayna caadi ahaan si fiican u jawaabaan hilling.
Dabcan, kaliya haddii habkani uu si taxadar leh loo fuliyay oo xididdada ayaa weli ah mid cakiran. Nidaamka asaasiga ah ee eggplants, iyo sidoo kale basbaaska, wuxuu ku yaalaa meel aad u dhow dusha dhulka, sidaas darteed hilling iyo dabacsan waa in lagu sameeyo daryeel weyn.
Jawaabta su'aashu waxay tahay mid aan qarsoodi lahayn, sababta oo ah Fiisooyinka qaar ayaa weli aaminsan in ukunta looska, sida basbaaska, muhiim maahan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la rumeysan yahay in hilling yar oo weli difaacaya nidaamka xididsan oo geedka this. Ka dib markaad akhrisato maqaalkan, waxaad awoodday inaad wax badan ka fahamto arrimaha, haddii hilling uu muhiim u yahay ama aan lagama maarmaan u ahayn dhirta gaarka ah, sababta ay u saameeyaan saameyntaas iyo saameynta ay leedahay. Waxaannu kuu rajeyneynaa dhirta caafimaadka leh iyo wax soo saarka weyn!